सिद्धार्थ शुक्लाको यो अन्तिम भिडियो भाइरल ,आफ्नी आमासँग देखिएका छन् (भिडियो सहित) – Ap Nepal
September 2, 2021 1029
आमासँग देखिएका सिद्धार्थ शुक्लाको अन्तिम भिडियो भाइरल भएको छ। भिडियोमा सिद्धार्थ आफ्नी आमासँग देखिएका छन्। उनी एयरपोर्टमा आफ्नी आमालाई लिन गएको भिडियोमा देख्न सकिन्छ। उनी स्फूर्त र सुनदर देखिन्छन्।
अचानक उनको हृ’दयघा’तका कारण निधन भएसँगै सो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। रियलिटी शो ‘बिग बोस–१३’का विजेता सिद्धार्थ शुक्लाको हृ’दयघा’तका कारण निधन भएको हो। करोडौं फ्यान फ’लोइङ कमाएका अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला पछिल्लो समय आफ्नो करियरको शिखरमा थिए।
कयौं टिभी शो र फिल्महरुमा काम गरिसकेका सि’द्धार्थले टिभी सिरियल ‘बालिका बधु’बाट रातारात चर्चा कमाएका थिए। त्यसोत अभिनेता सिद्धार्थले आफ्नो मृ’त्यु भन्दा ६ दिन पहिले मात्रै पनि मानव जीवनको बारेमा कुराकानी गरेका थिए। अभिनेता शुक्ला सोसल मिडिया ट्वीटरमा निकै सक्रिय थिए।
सिद्धार्थले आफ्नो प्रशंसकहरुलाई जवाफ दिनका लागि सबै भन्दा बढी ट्वीटर प्रयोग गर्ने गर्थे। सिद्धार्थ शुक्लाले यसअघि पनि एक प्रशंसकलाई ट्वीटरमार्फत् संसारमा माया र स’द्भाव फै’लाउन अनुरोध गरेका थिए। साथै उनले ट्वीटरमार्फत् नै आफ्नो प्रशंसकहरुलाई राम्रो राम्रो बाटोमा हिड्न प्रेरण दिने गर्थे।
सोही स्वभावका कारण सिद्धार्थले करोडौं प्रशंसकहरु अटु’लेका थिए। भारतीय सञ्चारमध्यमका अनुसार सि’द्धार्थले जुनसुकै कार्यक्रमहरुमा आफ्नो प्रशंसकहरुलाई विशेष ध्यान दिने गर्थे। एजेन्सी –
भिडीयो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्….
Prevनिशाको अन्तिम बिदाइ पशुपतिमा यसरी गरियो ,आमालाई सम्हाल्नै गा. ह्राे (हेर्नुस् भिडियो )
Nextटिक-टकमा लामो कपाल भएकै कारण भाइरल बनेकी शिखा राईसँगको यो रमाइलो कुराकानी (भिडियोमा हेर्नुहोस्)